Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah - Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington - Faa'iidada Medicare
Bogga ugu weyn > Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah
Boggeena ma wadaago ama ma sii daayo macluumaadkaaga shakhsiyeed.
Bayaanka Asturnaanta Websaydhka iyo Siyaasadda
Markaad daalacatid boggayaga internetka, ma soo uruurinayso macluumaad shakhsi ahaaneed oo lagugu aqoonsan karo oo adiga kugu saabsan. Haddii aad buuxiso oo aad soo gudbiso foomka codsiga macluumaadka ee khadka tooska ah, waxaan qabannaa macluumaadka aqoonsiga ee aad bixiso oo waxaan u isticmaalnaa oo keliya fulinta dalabkaaga.
Wax yar mooyee, lama wadaageyno macluumaadka shaqsiyeed ee aad kuqorto foom ama websaydhada laga yaabo inay ku aqoonsadaan, sida magacaaga oo buuxa, cinwaanka wadadaada, lambarka taleefanka, ama cinwaanka iimaylka oo aad lasocoto dhinac saddexaad.
Waxaa laga yaabaa inaan sii deyno macluumaadkaaga aqoonsiga shakhsiyeed kiisaskaan:
Waxaan mararka qaarkood la wadaagnaa macluumaadka aad soo gasho la-hawlgalayaashayada aan ku kalsoon nahay ee ganacsiga, kuwaasoo oggolaaday inay raacaan siyaasadahayaga asturnaanta.
Waxaan sii deyn doonaa macluumaad qaas ah oo adiga kugu saabsan si aan ugu hogaansano nidaam sharci oo sax ah sida waaran raadin, yeeris maxkamadeed, sharci, ama amar maxkamadeed.
Waxaan sidoo kale sii deyn karnaa macluumaad gaar ah kiisaska gaarka ah, sida haddii uu jiro isku day lagu jabinayo amniga degelkeenna, ama hanjabaad jireed oo adiga ama dadka kale ah.
Waxaan sidoo kale u isticmaali karnaa macluumaadka aad na siiso si aan gacan uga geysano hagaajinta adeegsiga bartayada.
Soo Degso ogeysiiskayaga Habdhaqanka Asturnaanta.
Macluumaadka shaqsiyadeed ee la aqoonsan karo iyo isticmaalka tikniyoolajiyada cookie
Waxaan ku soo aruurineynaa macluumaad aan shaqsi ahaan la aqoonsan karin iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyada "cookie" iyo / ama raadinta cinwaanka IP. Macluumaadka shaqsiyadeed ee la aqoonsan karo waxaa ka mid noqon kara biraawsarka aad isticmaasho, nooca kumbuyuutarka, taleefanka casriga ah, ama aaladda kale ee aad isticmaaleyso, nidaamkaaga qalliinka, adeeg bixiyahaaga internetka, iyo macluumaadka kale ee la midka ah. Lambarkaaga Aqoonsiga xubinnimada ama macluumaadka boggaaga kuma kaydsan buskudka.
Waxaan u isticmaalnaa macluumaadka noocaas ah wadar ahaan si aan u fahamno sida isticmaaleyaasheena, koox ahaan, ay u isticmaalaan adeegyada iyo ilaha lagu bixiyo bartayada. Markii aan dhahno waxaan u isticmaalnaa macluumaadka wadar ahaan, taasi waxay ka dhigan tahay in macluumaadka koox shakhsiyaad ah la soo uruuriyay oo laga baaraandegay si aan qofna macluumaadkiisa gooni loogu noqon karin. Waxaan barannaa isku-darka macluumaadka si aan u ogaano meelaha ay ka mid yihiin medicare.chpw.org yihiin kuwa ugu caansan, aagagaa u baahan horumar, iyo teknoolojiyada la adeegsanayo si aan u horumarinno medicare.chpw.org.
Inta badan daalacashada shabakada ayaa lagu wadaa inay aqbalaan cookies. Waad u dejin kartaa biraawsarkaaga inuu diido cookies, ama inuu ku baraarujiyo marka cookies la dirayo. Haddii aad sidaas sameyso, fadlan la soco in muuqaalada qaar ka mid ah medicare.chpw.org waxaa laga yaabaa inuusan si sax ah u shaqeyn.
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: Janaayo 28, 2021